Magaalooyinka Smart |
Xalalka nidaamka kormeerka wabiga yar iyo kuwa dhexe
Biyuhu waa isha nolosha, 4G router wuxuu door lama ilaawaan ah ka ciyaaraa badbaadada iyo horumarka aadanaha, laakiin masiibooyinka dabiiciga ah ee daadadka ka dhasha waxay halis weyn geliyaan nolosha dadka iyo badbaadada hantidooda, taasoo keentay khasaaro badan oo naf iyo maalba leh, iyo biyo. qasaarooyinka ...
Nidaamka nidaamka kormeerka fog ee saliida leh
Waxaa jira tiro badan oo ceelal shidaal ah oo kuyaala aagga ballaaran ee aagga shidaalka. Hawlgalka joogtada ah ee xasilloon ee qalabka soo saarista ceelasha saliidda ayaa ah xaaladda koowaad ee lagu hubinayo wax soo saarka saliidda. Qeybinta ballaaran ee ceelasha saliidda, kormeerka iyo xakameynta xaaladaha shaqada ee saliidda w ...
Codsiga Wi-Fi IOT boosteejada isgaarsiinta wireless ee wiishka kormeerka fog
Waagii hore, markii dadku ku go'doonsanaayeen wiishka wiishka, iridda kontoroolka fog ee PLC waxay ahayd inay caawimaad weydiisato shaqaalaha heeganka ah iyada oo loo marayo nidaamka isgaarsiinta ee wiishka, iyagoo sugaya shaqaalaha heeganka ah inay ku wargeliyaan shaqaalaha dayactirka inay yimaadaan goobta goobta. Mar haddii qofka ...
Nidaamka musqusha ee dadweynaha
Iyada oo ay ku socoto xawaareynta deg degga ah ee magaalaynta Shiinaha, garashada xarumaha bulshada ee magaalooyinka waxay noqotay astaan ​​muhiim u ah dhismaha "magaalo caqli badan". Musqusha dadweynuhu waa qayb lama huraan ah oo ka mid ah xarumaha adeegga dadweynaha ee magaalooyinka, taas oo ah daaqad lagu muujiyo sawirka o ...
Kiiska dalabka nidaamka ilaalada fiidiyaha bangiga
Maaddaama ay tahay meesha ugu weyn ee lacagta lagu kala wareejiyo bulshada maanta iyo isku xirka muhiimka u ah howlaha dhaqaalaha qaranka, bangiyada ayaa si isa soo taraysa u dalbanaya. Kaliya uma baahna nadiif iyo qurux, laakiin sidoo kale waxay u baahan yihiin jawi habboon, hufan, ammaan ah, iyo jawi farsamo sare leh. Halka baska ...
Xalka kormeerka boorka
1 、 Dulmarka guud ee 4G router Si loo xoojiyo daaweynta dhexe ee wasakhda boodhka, loo hagaajiyo awoodda kormeerka goobta ee waaxaha ilaalinta deegaanka, lana kormeero, loo maareeyo loona xakameeyo ilaha wasakhda hawada, Shenzhen ChiLink IOT Technology Co., Ltd. ayaa bilaabay insta ...
Digniinta daadadka daadadka iyo xalalka kormeerka
Sharaxaadda mashruuca Roob-duufaan ayaa si ballaaran loogu qaybiyey Shiinaha, xilliga daadadkuna aad buu u urursan yahay. Sannad kasta, aag ballaaran oo musiibo daadad ah ayaa dhaca. Wadooyinka 4G, daadadka buuraleyda ee uu keeno roobka culus ayaa inta badan dhaca oo waxyeelo weyn geysta. Iyadoo la raacayo baahida guud ...
Kormeerka wireless ee meelaha fogfog
Nidaamka wax soo saarka router 1 、 4G muuqaalka guud 4G nidaamka la socodka gudbinta fog wuxuu adeegsadaa mabaadii'da beddelka awoodda dabaysha si loo siiyo koronto qalabka fogfog ama korontada ee qalabka kormeerka. Waxay ka kooban tahay marawaxadaha dabaysha yar, guddi qoraxda ah, koontaroole kaabayaal muuqaal ah, p badan ...
Nidaamka la socodka tayada hawada
Horumarka degdegga ah ee dhaqaalaha iyo bulshada iyo dardargelinta magaalaynta 20-kii sano ee la soo dhaafay, aagga horumaray, wasakhda hawadu way ka beddeshay wasakhda dhuxusha ee magaalada keliya ee xaafadda iyadoo loo beddelay wasakhda isku-darka aagga wada-noolaanshaha sida nooca dambas iyo qiiqa gawaarida. Al ...
Lasocodka fiidiyowga wirelesska ee xarumaha gaaska
ilaa 600; Sannadkii 1985, Shiinaha waxaa ku dhowaad 3600 kaalin shidaal ah; dhammaadkii 1990, waxaa jiray in ka badan 5000; sanadkii 1993, waxaa jiray ilaa 38000 oo saldhigyo shidaal; dhammaadkii 1996, waxaa jiray 42600 kaalimo shidaal. Dhamaadkii 2000, Shiinaha waxaa ku yaal in kabadan 80000 oo kaalimo shidaal. Ku wajahan kooxdan ...
Barnaamijka nidaamka la socodka dhawaqa deegaanka
Nidaamka Nidaamka: Horumarka iyo horumarka bulshada aadanaha, caan ka ahaanshaha qalabka 4G ee qalabka mishiinka router-ka, buuqa ayaa aad iyo aad u sii xoog badan, dhulkuna ma laha nabad waagii hore. Sawaxanka wuxuu ku faafay dhamaan bulshada aadanaha, wuxuuna bilaabay inuu saameyn balaaran ku yeesho aadanaha sidaa ...
Nidaamka kormeerka fog ee shabakadda bixinta biyaha
Nidaamka helitaanka fog iyo nidaamka xakamaynta shabakadda bixinta ee Shenzhen ChiLink IOT Technology Co., Ltd. waxay mideyneysaa kormeerka wax soo saarka, dirista, qaabka falanqaynta xogta iyo maareynta ganacsiga ee bixinta biyaha magaalooyinka, kuleylinta iyo dhuumaha gaaska oo loo maro nidaam dhammaystiran. 4G ro ...